यतिलाई राज्यको सम्पत्तिको जिम्मा लगाउनुको तात्पर्य के?: सांसद संग्रौला(भिडियो सहित) - हिमाल दैनिक
यतिलाई राज्यको सम्पत्तिको जिम्मा लगाउनुको तात्पर्य के?: सांसद संग्रौला(भिडियो सहित)
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग यती होलिडङ्स ग्रुपलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुको कारण माग गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले यती होलिडङ्स ग्रुपलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुको कारण माग गरेकी छिन् ।
यती समुहलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनु सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने प्रष्ट भएको भन्दै उनले यसबाट राज्यलाई ५ अरब नोक्सानी भएको तर्क गरिन् । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आफ्ना मान्छेलाई सत्ताले उन्मुक्ति दिएको आरोप उनको छ । उनले चीनमा रहेका नेपालीलाई सरकारले छिटो उद्धार गर्नुपर्ने पनि बताए ।
यतिसंग सती जानु सरकारको के कारण छ?
यतिसंग सती जानु सरकारको के कारण छ?एउटा ब्यापारीक समुहलाई राज्यको सम्पत्तिको जिम्मा लगाउनु के कारणले हो?
Posted by Himal Dainik on Wednesday, February 12, 2020
बैठकमा(नेकपा) सांसद झपड बहादुर रावलले छुवाछुत उन्मुलन गर्न दलित समूदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसरकारसँग आग्रह गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सीमा क्षेत्रका व्यपारीहरुलाई प्रहरीले दुःख दिने गरेको बताए ।
कांग्रेसका सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लोकप्रिय नारा अघि सारेको भएपनि जनताले समृद्ध नेता, दुःखी नेपाली को महसुस गरिरहेको बताए ।
बैठकमा ‘कारागार विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् । त्यसअघि बैठकले सो विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्रीलाई अनुमति दिएको थियो ।
बैठकमा ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन, २०७६’ पेश भएको छ । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सभामा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । बैठकले ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०७६’ पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन २ गते अपराह्न २ बजे बस्नेछ ।
Prevपछिल्लोहिमालयन शेर्पा र जाउलाखेल बराबरीमा
अघिल्लोएम्बुलेन्स खरिदमा कुनै घोटाला भएको छैन: विकासमन्त्री सुबेदीNext